Soo dejisan GeForce Experience 3.20.0.118 – Vessoft
WindowsMadadaaloXakamaynta waxqabadkaGeForce Experience
Bogga rasmiga ah: GeForce Experience
GeForce Experience – software awood for the updates darawalka video shirkadda NVIDIA. software The wargelinaysaa ku saabsan versions cusub oo darawallada ee adabtarada a graphic iyo wuxuu kuu ogolaanayaa inaad dhigay goobaha si mug leh for the kulan caan ah. Experience GeForce isticmaalaa technology ShadowPlay si ay u qoraan ama baahiyey video Streaming ee HD on dhifasho. GeForce Experience ku jira feature a kuu ogolaanaya inaad si ay u gudbiyaan horumarka ciyaarta ka computer ah in qalab kale.
Cusbooneysiinta ee darawallada kaarka muuqaallo kale ka NVIDIA shirkadda
Goob ka mid ah fursadaha ciyaaraha fiicnayn
Duubista of video ka screen a
Baahiyey of video Streaming on dhifasho a
Soo dejisan GeForce Experience
Faallo ku saabsan GeForce Experience
GeForce Experience Xirfadaha la xiriira